Dr. Tint Swe's Writings: January 2016
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = Dr. Tin Mar Aung ဒေါက်တာတင်မာအောင်
ကွန်မင့် (၁) = MrChit Htwe dr စိုင်းခမ်းလိတ် တို့လို့ စိတ်ထားမျိုး မထား နိုင်တာပဲ အနားယူသွားတဲ့ လူကို အပြစ်တင်
ကွန်မင့် (၂) = Ko Oo Naing ပြည်သူတရပ်လုံးကိုယ်စား အမေ့ကို အနီးကပ် လိုလေသေးမရှိပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ Dr တင်မာအောင်ကို ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် PA ကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာခင်ဗျား
ကွန်မင့် (၃) = Pe Thet Han ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ။ ရင်ထဲက အမှတ်အတေးနဲ့ မကျေနပ်နေတာလား။ မဖြစ်သင့်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ ပိုပြီးညီညွတ်သင့်ပါတယ်။
• ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အဖြစ်တာတော့ မသိပါ။ သူက ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းပါ။
• ဒေါက်တာတင်မာအောင်ကိုလည်း ဆရာဝန်ချင်းဖြစ်လို့ မောင်နှမလို့ပဲသဘောထားပါတယ်။ လေးစာပါတယ်။ သူ့နောက်ခံကို သူနဲ့ဌာနတခုတည်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအရင်းကိုလည်း ဟိုအရင်ကတည်းက မေးမြန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
• ကျွန်တော်ရေးတာက ဒေါက်တာတင်မာအောင်မှားတယ်လို့ ရေးတာမဟုတ်ပါ။ သူက သူ့တာဝန်အရ အတိအကျ အကြောင်းကြားတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း တလုံးမကျန် အစည်းအဝေးမှာပြောပြတယ်။ တကယ်လုပ်သွားတာက ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာတွေကို ထောက်ပြတာဖြစ်တယ်။
• ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်ကပဲ ကြားကနေ လီဆယ်သလိုလို ပြောကြတယ်။ ဂုံးချောစကားပြောတယ်။
• စည်းကမ်းအတိုင်းသာလုပ်ရင် ကွန်မြူနတီအတွက် ဒေါ်စုပေးနိုင်တဲ့အချိန်ပိုရပါမယ်။ ပရိုတိုကောဌာနက တနာရီပြည့်တာနဲ့ ဒေါ်စုကို နောက်တနေရာသွားဘို့ ကားပေါ်ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလုပ်ပါတယ်။
• စည်းကမ်းနဲ့မညီတာမှန်သမျှ ကျွန်တော်မကြိုက်ကြောင်းကို ကျွန်တော့်ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဖတ်နေသူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး မေးဘူးသူတိုင်းက သိကြပါတယ်။
ဒေါ်စုရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာတင်မာအောင် လက်ရှိတာဝန်ကနေ အနားယူတော့မယ်တဲ့။ အမှတ်ရတာလေးတခု ရှိပါတယ်။
၂ဝ၁၁ တုံးက အိန္ဒိယကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်လာတော့မယ်ဆိုတော့ ပြင်ကြဆင်ကြရပါတယ်။ အိန္ဒိယကနေ ဒေါ်စုကို ဖိတ်တာကလည်း နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်အဆင့်နဲ့ အလားတူဖြစ်လို့ ဒေါ်စုသွားမယ့်လာမယ်ခရီးစဉ်တွေ၊ တွေမယ့်သူတွေ၊ လုံခြုံရေးစတာတွေအသေးစိတ်ကို အစိုးရကနေတာဝန်ယူပါတယ်။ Protocol department ကနေ အားလုံးစီစဉ်တယ်။
တခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့အတူ မြန်မာကွန်မြူနတီနဲ့ပါတွေ့ဘို့ပါတယ်။ ဒေါ်စုသိထားတာက သူဆုရတဲ့ငွေနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ Prospect Burma ကျောင်းသာရှိတော့ (ပရိုတိုကော်လ်) အရာရှိတွေက အဲဒီကျောင်းကိုလာကြတယ်။ ကျွန်တော်က ကျောင်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လို့ ဆွေးနွေးရတယ်။ အချိန်က စုစုပေါင်းတနာရီတိတိရမယ်တဲ့။
(ပရောစပက်ဘာမား) ကျောင်းလေးကသေးသေးလေး။ ဒေလီမှာနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်က လူဦးရေက ၄-၅ ထောင်။ အဲတာနဲ့ ရတဲ့တနာရီကို ၂ နေရာခွဲရအောင် (ပရိုတိုကော်လ်) အရာရှိတွေနဲ့ ညှိရတယ်။ (အောက်စဖို့ဒ်) ကျောင်းကို ရွေးတယ်။ အဲဒီကျောင်းကို ဦးမောသီရိ (ကွယ်လွန်) မိသားစုကပိုင်တာပါ။ ဆရာမကြီးကိုသွားပြောရတယ်။ ဝမ်းသာအားရ လက်ခံပြီး စီစဉ်ပေးမယ်လို့သိရတယ်။ ဒေါ်စုကို လက်ဖက်ရည်နဲ့ဧည့်ခံရင်း မိတ်ဆက်ဘို့နဲ့ စကားပြောမဲ့စဉ်မြင့်၊ စတာတွေ အစီအစဉ်ဆွဲကြတယ်။ အဲတာကို (ပရိုတိုကော်လ်) အရာရှိတွေကိုပြန်ပြောတော့ သူတို့ကလည်းရတယ်။ ဒေါ်စုကို ဧည့်ခံမယ့် အစားအသောက်တွေကို စစ်ဆေးမယ်။ ဆက်မယ့်ပန်းစည်းတွေကို စစ်ဆေးမယ်။ အနီးကပ် ထိုင်မယ့်သူတွေ စာရင်း စတာတွေယူပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးနာမည်တွေပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရအရာရှိတွေကလည်း သဘောတူ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်ကျောင်းကလည်း လက်ခံမှ မြန်မာကွန်မြူနတီကို ပြောရတယ်။ အဲလိုချိန်မျိုးမှာ ဒေါ်စုကိုသူတို့လောက် ချစ်တဲ့သူ၊ လေးစားတဲ့သူ၊ ထောက်ခံသူမရှိဆိုသူတွေက ရေတွက်မကုန် ထွက်ပေါ်လာစမြဲပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ကို ဘယ်တုံးကမှ တိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်တဲ့ကျွန်တော်က ဒေါက်တာတင်မာအောင်ဆီ ဆက်သွယ်ရပါတော့တယ်။ သူကလည်း အချိန်တိကျဘို့၊ လဖက်ရည်သောက်ချိန်မရှိ၊ လူတဦးချင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ချိန်မရှိ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ချိန်မရှိ စတဲ့စည်းကမ်းတွေပြောပါတယ်။ အဲတာနဲ့ အောက်စဖို့ဒ်ကျောင်း + ကွန်မြူနတီကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။ ဒိနောက်ပိုင်း ကွန်တော်က (ပရောစပက်ဘာမား) ကျောင်းကိုသာ အသေးစိတ်စီစဉ်ပြီး ကွန်မြူနတီကိစ္စကို တိုက်ရိုက် ဝင်မပါတော့ပါ။
၁၆-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့မှာ (ပရောစပက်ဘာမား) ကျောင်းကို အရင်ဆုံးလာတယ်။ အဲဒီတုံးက ကချင်တွေကမကျေနပ်လို့ မလာကြဘူးဆိုတဲ့သတင်းကို ဒေါ်စုကကြားထားပြီးပါပြီ။ စကားပြောအပြီးမှာ အနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော့်လက်ကိုကိုင်ပြီး ကချင်တွေက ကျမကိုမကျေနပ်လို့ မလာဖူးကြားတယ်။ လာစေချင်ပါတယ်။ ဘာမဆို သဘောထားမတူတာရှိရင် ဆွေးနွေးဖြေရှင်းတာ အကောင်းဆုံးပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်စုကို ကျွန်တော်က ၁၉၉ဝ NLD အမတ်ပါလို့ မိတ်မဆက်ခဲ့ပါ။ သူပြောခဲ့တာကိုတော့ ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်း လူအများသိအောင်ပြန်ပြောပါတယ်။
အဲဒီကနေ နောက်ကျောင်းကို လုံခြုံရေးကားတန်းနဲ့အတူလိုက်ရတယ်။ အလိုက်သိတဲ့တယောက်က သူ့နေရာဖယ်ပေးလို့ ထိုင်ခွင့်ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ဒေါက်တာတင်မာအောင်ပြောတဲ့ စည်းကမ်းတွေကိုပြောပြမိတဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အောက်စ်ဖို့ဒ်ကျောင်းနဲ့ မျက်နှာပျက်ရပါတယ်။ ကွန်မြူနတီထဲ ဟိုပြောသည်ပြောတာတွေတော့ ခေါင်းထဲမထည့်ပါ။ လဖက်ရည်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်။ ဓါတ်ပုံစုရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ကဖိတ်လို့ Press card ရပြီးသားသထင်းထောက်တွေနဲ့လည်း အထဲမဝင်ရလို့ မျက်နှာပျက်ရတယ်။ ကျောင်းလေးမှာတော့ သတင်းသမား ကိုဇာနည်တို့ လင်မယားကလာနိုင်ကြလို့ အခုတင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းနဲ့ အုပ်စုဓါတ်ပုံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံ မပါရပါ။
ဓါတ်ပုံ = ဒေါက်တာရွန်ဘိတ် (အဲဒီတုံးက ကျောင်းအုပ်နဲ့ အခု ဖလမ်း NLD)၊ ဒေါက်တာခါလီက (ဒေါ်စုနဲ့ အောက်စဖို့ဒ်မှာ ကျောင်းနေဖက်)
ကိုတရုပ်ကြီး (ခေါ်) ကိုမြင့်တိုးနဲ့ မစူးတို့အိမ်မှာ ဧည့်သည်လုပ်၊ လက်ဖက်သုပ်စားခဲ့ပါတယ်။ အဲတာက ကရင်နဲ့ မွန်အိမ်က ကလေးမွေးနေ့မှာ ထမင်းစားခဲ့ပြီးအပြန်မှာပါ။
အိမ်မပြန်ခင် Gold Mon Grocery မွန်စတိုးဆိုင်မှာ ဈေးဝင်ဝယ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင် မွန်အမျိုးသားက စိတ်ဝင်စားလို့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ မေးတယ်။ သူက မြန်မာပြည်မှာ NLD အစိုးရတက်မှမို့ တိုင်းပြည်အတွက် အားတက်စရာလို့ဆိုပါတယ်။
သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ ဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ ပြောကြတာများပြီ။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာက ဘာဟုတ်သေးလည်း၊ ရေဒီယိုတွေမှာ တဝီဝီညံ၊ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း ပလူပျံနေတာပဲ။ မကြာမီကြေညာမည်ဆိုတော့ ထီမထိုးပဲ ပေါက်ချင်သူမျိုးလည်း ရှိမှာပဲ။
ပြောတဲ့အသံတွေနားထောင်၊ တင်တဲ့သတင်းခေါင်းစီးတွေကြည့်ရင် အရည်အသွေးကို မှန်းလို့ရတယ်။ တချို့ဟာတွေကို ကြားရတာ အားတက်စရာမကောင်းပါ။ ထင်ကြေးပေးရင်း ထောက်ပြတဲ့အချက်အလက်တွေက အပြုသဘောတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခွံတွေကများတယ်။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို ပြောရတာ အတော်ကို (အတော်ကြီးကို) သတိထားရတယ်။ အဲလို အထိမခံရွှေပန်းကန်ဖြစ်နေတာ ကောင်းစေတဲ့လက္ခဏာာမဟုတ်ပါ။ ကွဲလွယ်ရှလွယ်တဲ့အရာဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာအသုံးမကျပါ။
အပြောမခံရတိုင်းတော့ အဟုတ်မှတ်မနေနဲ့။ မျက်နှသာပေး ရွှေရေးပန်းကန်တက်၊ ခက်တယ်ဗျာ။
ဆရာ မျက်စိအတွင်းတိမ်ကို ခွဲကုမှပျောက်မှာပါလား ဆရာ။ တခြားနည်းရှိသေးလားဆရာ။ ဘာ့ကြောင့် တိမ်ဖြစ်ရတာလဲသိချင်ပါတယ်။ ရေပေါင်တက်နေတယ်လဲ ပြောပါတယ်ဆရာ။နားသိပ်မလည်လို့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။
နာတာကျင်တာ ဘာမှမခံစားရဘဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ ရေရှည် မျက်စိမှန်ဘီလူးမှာ တိမ်လိုဖြစ်လာတာကို ခေါ်တယ်။ အမြင်စွမ်းအားက တဖြေးဖြေးမှုံဝါးလာမယ်။ ကြာရင် မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• အသက်ကြီးမှဖြစ်တာများပေမဲ့ ငယ်သူတွေမှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အမေရိကားမှာ အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူတွေမှာ တဝက်မက တိမ်ရှိကြတယ်။ မွေးကတည်းက ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ခိုက်မိလို့ဖြစ်ဖြစ် တိမ်ဖြစ်တာလဲ ရှိတတ်တယ်။ ဆီးချို၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ထိခိုက်မိတာ၊ (စတီရွိုက်) ဆေးအကြာကြီးသုံးရတာ၊ နေရောင်၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်တာတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
မျက်စိစမ်းသပ်ပါ။ လိုအပ်ရင် သူငယ်အိမ်ကျယ်စေပြီးမှ စမ်းရမယ်။
• ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အကြည့်ကို မျက်မှန်နဲ့ မမြင်ရတော့ရင် ခွဲစိတ်ရမယ်။ ဆေးရုံမတက်ဘဲလဲခွဲလို့ရတယ်။
• ခွဲစိတ်နည်း ၂ နည်းရှိတယ်။
Phacoemulsification (Phaco) နည်းကို အများဆုံးသုံးတယ်။ မှန်ဘီလူးကို Ultrasound waves နဲရှင်းပေးပြီး ထုတ်ပြစ်တယ်။ Intraocular lens (IOL) ကိုအစားထိုးပေးမယ်။ extracapsular cataract surgery နည်းမှာ ဒါးရာပိုကြီးရတယ်။
• ခွဲပြီးစမှာ အလင်းရောင်ကို ကောင်းကောင်းအထိမခံနိုင်သေးဘူး။ နေကာမျက်မှန်တပ်ရမယ်။ အနာကျက်ဘို့ရာ ၈ ပါတ်လောက် ကြာနေမယ်။ ကြည့်ရတာတော့ ချက်ချင်းဆိုသလို ကောင်းလာမယ်။
• ခွဲပြီး အဆင်မသင့်ဖြစ်တာ ရှားပါတယ်။ သွေးယိုတာ၊ ပိုးဝင်တာ၊ မျက်စိဖိအား ပြောင်းသွားတာတွေ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ Retinal detachment ဆိုတာဖြစ်ရင် ချက်ချင်းကုသရမယ်။ ထပ်ခွဲရတတ်တာလဲရှိနိုင်တယ်။ ဖြစ်တာကို လေဆာနဲ့ ကုသနိုင်တယ်။
• တိမ်ဖြစ်လာလို့ ချက်ချင်းလဲ ခွဲချင်မှ ခွဲရတယ်။
- ဆီးချို ရှိရင် ထိန်းနေပါ။
- အရက် မသင့်ပါ။
Eye Astigmatism and Amblyopia သူငယ်အိမ်စောင်းခြင်း နဲ့ ပျင်းတဲ့မျက်စိ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/astigmatism-and-amblyopia.html
Laser Eye Operation လေဆာနဲ့ မျက်မှန်မလိုအောင်လုပ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/laser-eye-operation.html
လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်တုံးက သမီးတင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို မနေ့ကနဲ့ကနေ့ ကွန်မင့်တွေထပ်လာလို့ထင်ပါတယ်၊ ပြန်ပေါ်လာလို့။
June 16, 2012 Happy Father's Day ဖေဖေ ဒေါက်တာ Tint Swe
ဓါတ်ပုံကတော့ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ မြို့သာမှာတိုက်နယ်ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့စဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။
သမီးနေနေအိမ်မှာ ညနေစာ၊ ဘာနေ့ရယ်တော့ မဟုတ်ပါ။
ဝက်စတူးမှာ ကန်စွန်းရွက်တင်၊ ဝက်ခေါက်ကင်နဲ့ အချဉ်၊ ပုဇွန်ဟင်းတခွက်နဲ့ ပဲသီးချက်၊ ပဲလိပ်ပြာရွက်သုပ်၊ ငရုပ်သီးစိမ်းထောင်း၊ မြိန်ယှက်စားကောင်း။
လက်ဖက်ခြောက်ကောင်းမွှေးမွှေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်း၊ ဇယန်းလက်ဖက်၊ မနက်စာအတွက်လည်းထည့်ပေး၊ ကလေးတွေလည်းဆော့ကစား ပျော်ပျော်ပါးပါး။ အမေရိကားမှာ ဗမာလိုသာစားတဲ့ မိသားစုများ။
Photo by Thadar Tint Swe
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၁၉၄၇ နှင့် ၂ဝဝ၈ နှိုင်းယှဉ်ချက် (နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ အရည်အချင်းများ)
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ချင်သူတွေက အဲတာဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းရေးခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ အတိုင်းဘဲလို့ ပြောနေကြတယ်။ အဲလိုပြောတာ မှားပါတယ်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံကို မြန်မာဘာသာနဲ့ အလွယ်မရှာနိုင်သေးလို့ အင်္ဂလိပ်လိုသာကိုးကားပါရစေ။ ၁၉၄၇ ထဲမှာ ပုဒ်မ ၄၉၊ (၁) နဲ့ (၂) ပါပြီး၊ ၂ဝဝ၈ မှာ (က) ကနေ (ဆ) အထိပါပါတယ်။
49. No person shall be eligible for election to the office of President unless he –
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇ ခုနှစ်)
၄၉။ (က) မိမိကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ မိမိ၏မိဘနှစ်ပါးသော်၎င်း၊ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၏ပိုင်နက်အတွင်း၌ မွေးဖွားခဲ့၍ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်သော၊ ထို့အပြင်
(ခ) ပါလီမန်အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံနိုင်သည့် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်လည်းဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မဟုတ်လျှင်၊ မည်သူမျှ နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးအတွက် ရွေးကောက်ခံနိုင်ခွင့် မရရှိစေရ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂ဝဝ၈ ခုနှစ်)
၅၇၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများသည် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်၊
၅၈၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံးတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး အထွတ်အထိပ်နေရာ ရရှိသည်၊
၅၉၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
( ခ ) မိမိနှင့် မိမိ၏မိဘနှစ်ပါးလုံး နိုင်ငံတော့်အာဏာ ပိုင်နက်အတွင်း၌ မွေးဖွားသော တိုင်းရင်းသားမှဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
( ဂ ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူသည် အနည်းဆုံး အသက် ၄၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) နိုင်ငံတော်အရေးအရာများဖြစ်သော နိုင်ငံရေး။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးစသည့် အမြင်များရှိရမည်။
( င ) သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့်တစ်ဆက်တည်း အနည်းဆုံးအနှစ် ၂ဝ နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။
ချွင်းချက်၊ နိုင်ငံတော့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက်သည့်ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရမည်၊
( စ ) မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏မိဘ တစ်ပါးပါး သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ တရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးဦးသော်လည်းကောင်း၊ ထိုတရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော်လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို ခံယူစောင့်ရှောက်ရိုသေသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအစိုးရ့ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သူများ မဖြစ်စေရ။ ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားသော်လည်းကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေးများနှင့် ကျေးဇူးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူများ မဖြစ်စေရ။
(ဆ) လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံပိုင်ခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများအပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းများနှင့်လည်း ပြည့်စုံရမည်၊
အချုပ်၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ အရည်အချင်းများဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင် ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတာနဲ့ မတူပါ။
• ဗူးခါးရေနဲ့ ကြမ်းကြားလေ၊
• မိုးခါးရေသောက်သူတွေများလို့ ကျောင်းကား ဇရပ်သွင်ဖြစ်ရ၏။
• ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူးဆိုလို့၊
• အညွန့်အဖူးလေးတွေ အပေါက်ဆန်ခါတွင် စာသင်ကြရ၏။
• ပညာရှာ ပမာသူဖုန်းစား၊
• ဘုန်းတန်ခိုးထွားသူတွေများလို့ ကျောင်းသားတွေ သူဖုန်းစားဖြစ်ရ၏။
• သူတော်မဟုတ် ယုတ်သည့်စရိုက်၊
• လူသူမိုက်ကို မကြိုက်မချစ်၊
• ရန်သူစစ်သို့ မနှစ်သက်ဘဲ၊
• ဝေးစွာရှဲ၍ အမြဲခွါရှင်း၊ ဖဲကြဉ်မင်း။
ဆရာ ပုံပါဆေးကို အမြဲသောက်လို့ရလားဆရာ။
(ပန်တိုပရာဇိုးလ်) ဆေးဟာ လူသုံးများတယ်။ Proton pump inhibitors အမျိုးအစားဆေးဖြစ်တယ်။ အစာအိမ်လေနာ၊ အူသိမ်အစပိုင်းလေနာ၊ အစာမျိုပြွန်ကနေ အစာခြေရည်အထက်ဆန်တာအတွက်ပေးတယ်။ အစာအိမ်က အက်စစ်ရည် ထွက်တာကို နည်းစေတယ်။ ရင်ပူတာသက်သာစေမယ်။ အစာမျိုခက်တာနဲ့ မပြတ်တမ်းချောင်းဆိုးနေတာအတွက်ပါ ပေးနိုင်တယ်။ ဆေးန်ာမည်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Pantocid 40 နာမည်နဲ့လည်းလာတယ်။
• Duodenal ulcer အူသိမ်အစပိုင်းလေနာဆိုတာ Helicobacter pylori infection ဗက်တီးရီးယားကနေဖြစ်တယ်။
• Zollinger-Ellison Syndrome ရောဂါအတွက်လည်းပေးတယ်။ အဲတာက ရှားတဲ့ သရက်ရွက်နဲ့ အူသိမ်အစပိုင်းမှာ အကျိတ်ဖြစ်တာ။ အစာခြေရည်တွေအများကြီးထွက်စေတယ်။
• အူသိမ်အစပိုင်းလေနာအတွက် 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၂-၄ ပါတ်။ Helicobacter pylori infection ကြောင့်ဖြစ်ရင် ပိုးသေဆေးနဲ့ပါတွဲပေးရတယ်။
• Gastric ulcer အစာအိမ်လေနာအတွက် 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄-၈ ပါတ်။
• Reflux oesophagitis အစာခြေရည်အထက်ဆန်လို့ရောင်တာတာအတွက် 40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄-၈ ပါတ်။
• Zollinger-Ellison Syndrome ရောဂါအတွက် 40 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။
• Gastro-oesophageal reflux disease (GERD) အစာခြေရည်အထက်ဆန်တာအတွက် 20 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄ ပါတ်။ လိုသေးရင် နောက်ထပ် ၄ ပါတ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ပျို့-အန်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ သွေးဖြူဥနည်း၊ သွေးမှုံနည်းတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တာရှည် (၃ နှစ်ကြာ) သောက်ရင် ဗီတာမင် ဘီ-၁၂ နည်းစေတတ်တယ်။ အဲတာနည်းရင် အားနည်းမယ်။ လျှာအနာပေါက်မယ်။ ခြေလက်ထုံမယ်။
• ကျွန်တော်နေရတဲ့နေရာမှာ (နိုင်းဝမ်းဝမ်း) ဆိုတာ လက္ခဏာရေးသုံးပါး။
• မီးသတ်ကားလား၊ ရဲလား၊ လူနာတင်ကားလား၊ သုံးခုလုံးလား။
• မြန်မာပြည်မှာ တော်တီတော်တီ အသံမည်ကား၊
• လူကြီးကားလား၊ လူနာကားလား၊
• ခွဲခြားမရ ဖယ်ပေးကြရ၊ မရဏ၊ အနိစ္စနဲ့ ဒုက္ခပါတကား။
Photo: Hillary Clinton makes historic visit to Burma as she attempts to persuade regime to sever nuclear ties with North Korea on 1 December 2011
လက်ရှိလွှတ်တော်နောက်ဆုံးနေ့ကသတင်းတွေ ဖတ်ရတယ်။ အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ဒေါ်စုကိုအလှဆုံးလို့ အကဲဖြတ်တာကိုလည်း ကြားရပါတယ်။
ကျွန်တော်နယူးဒေလီမှာနေတုံးက အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ နေ့တိုင်း တွေ့ဆုံ ပြောဆို ဆွေးနွေးရပါတယ်။ တခါတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချောမောတဲ့သဘော အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးအနှုန်းသုံးဘို့ နည်းနည်းအခက်အခဲရှိနေတဲ့ အိန္ဒိယပညာရှင်တယောက်ကို ကျွန်တော်က Graceful လို့ထောက်ပေးလိုက်တာ သူက သဘောကျ လက်ခံသွားပါတယ်။
မြန်မာစကားမှာလည်း အမျိုးသမီးတဦးကို လှတယ်၊ ချောတယ်လို့ပြောတာမှာ နေရာနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်သာ ဒေါ်စုလိုအရွယ်နဲ့ ဂုဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကို လူအများရှေ့မှာ မှတ်ချက်ပေးစရာရှိလာရင်တော့ ကျက်သရေရှိတယ်လို့သာ ပြောမှာပါ။
Graceful = Beautiful, Elegant, Smart, Stylish, Well-dressed, Well-designed, Sophisticated, Attractive
(၁) Treating Skin Infections အရေပြားနာများ
တမာရွက်ကို နူးသွားအောင်ပြုတ်ပါ။ ပြုတ်ရည်ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်လာမယ်။ အရွက်တွေအရောင်ပြောင်းလာမယ်။ ပြုတ်ရေကို ဆေးအဖြစ်လိမ်းပါ။ ရေချိုးရေထဲလဲထည့်သုံးပါ။
(၂) Addressing Acne Problems ဝက်ခြံ
တမာရွက် ပြုတ်ရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့ ဝက်ခြံပေါ်လိမ်းပေးပါ။ (တမာ+သခွါးသီး) နဲ့ (တမာ+ရောဂတ်) တွေကို မျက်နှာမှာ ကပ်နိုင်တယ်။
(၃) Used as Skin Toner အရေပြားတင်းဆေး
တမာရွက် ပြုတ်ရည်ကို မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေထင်နေတာ သက်သာစေမယ်။ ငယ်ရုပ်ဆင်စေမယ်။ ဝက်ခြံအမာရွတ် ထင်နေတာ သက်သာစေမယ်။ (တမာ+နှင်းဆီ) ကိုမျက်နှာမှာကပ်နိုင်တယ်။ ပြီးရင်မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။
(၄) Remedy for Dry Skin အရေပြားခြောက်နေရင်
တမာမှုံ့ထဲမှာ စပျစ်စေ့ဆီနဲ့ရောပြီး မျက်နှာကို ညီညီညာညာလိမ်းပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာရင် ရေအေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပါ။
(၅) Cure for Skin Pores အရေပြားအပေါက်များ
ဝက်ခြံခေါင်းမဲကနေ ကျန်ရစ်တဲ့အပေါက်တွေကို သက်သာစေမယ်။ (တမာရွက် + လိမ်မော်ခွံ) ရောထောင်းပါ၊ (ပျားရည် + ရောဂတ် + ပဲပုပ်ဆီ) နဲနဲစီရောပါ၊ တပါတ် ၃ ကြိမ်လိမ်းပါ။ တမာဆီလဲသုံးနိုင်တယ်။
(၆) Takes care of Hair Troubles ဆံပင်
ဆံပင်ပေါက်သန်စေမယ်။ တမာဆီကို ဘောက်၊ မှိုရောဂါတွေအတွက်သုံးနိုင်တယ်။ တမာမှုံ့နဲ့ရေရောပြီး ခေါင်းလိမ်းပြီး တနာရီစောင့်ပါ၊ နောက် ခေါင်းလျှော်လိုက်ပါ။
တမာထဲကဓါတ်ကို Azadirachta indica ခေါ်တယ်။ Ayurveda အာယုဗေဒဆေး၊ Unani အူနာနီ နဲ့ Homoeopathic medicine ဟိုမီယိုပက်သစ်ဆေးနည်းတွေမှာသုံးကြတယ်။ ခေတ်ပေါ်ဆေးနည်ရဲ့ အဓိကသုံးလို ဖြစ်လာနေတယ်။
သူ့ကိုဓါတ်ခွဲရင် ဒြပ်ပေါင်း ၁၄ဝ မကပါတယ်။ တမာရွက်၊ တမာပွင့်၊ တမာစေ့၊ တမာမြစ်၊ တမာသီး၊ တမာခေါက်တွေကို စမ်းတာဖြစ်တယ်။ ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူ၊ အရေပြားနာတွေနဲ့ သွားမကောင်းတာတွေအတွက် သုံးကြတယ်။ အများဆုံးက တမာရွက်ကိုသုံးတယ်။
ဆေးဝါးဗေဒအရ Immunomodulatory ခုခံအား၊ Anti-inflammatory ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်၊ Antimalarial ငှက်ဖျား၊ Antifungal ဖန်းဂတ်စ်၊ Antibacterial ဗက်တီးရီးယား၊ Antiviral ဗိုင်းရပ်စ်၊ Antimutagenic and Anticarcinogenic properties ကင်ဆာ၊ အစွမ်းတွေအပြင် Antiulcer, Antioxidant, Antihyperglycaemic အစွမ်းတွေလဲရှိတယ်။
ပင်လုံညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ ကချင်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလဘန်ဂရောင်ပါခဲ့တယ်။ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာတော့ ဒီနာမည်ဟာ လူတွေကို အော့နှလုံးနာစေခဲ့တယ်။ (တစည) ပါတီဟာ NLD ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လို့ (တစည) ကိုသာ အပြစ်မြင်ခဲ့ကြတယ်။
သူ့တူမ ရွှေကူမေနှင်းကနေ အင်တာဗျူးလုပ်တော့ ဒီလိုဖတ်ရပါတယ်။
“အန်ကယ် ဒေါ်စုကို ဘာလို့ ကန့်ကွက်တာလဲဟင်။ အန်ကယ့် ဘာသာ ကန့်ကွက်တာလား။ ပါတီက ခိုင်းတာလား”
“ဒီမယ် မိစံမေ၊ ငါ့ကို ဘယ်သူက ခိုင်းလို့ ရမှာလဲ။ ငါ့ဟာငါ ကန့်ကွက်တာ”
“ဟ ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ သူက ဗဟန်းမှာ လာဝင်တယ်၊ ငါကလည်း ဗဟန်းဆိုတော့ ငါ ကန့်ကွက်ရမှာပေါ့။ အဲဒီ ဥပဒေက သူ့ အဖေကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ နင်သိချင်ရင် ဥပဒေစာအုပ်မှာ သွားကြည့်။ နင့်မှာစာအုပ်မရှိရင် စာကြည့်တိုက်မှာသွားရှာ။”
(၁) သမိုင်းကောင်းခဲ့သူတွေလဲ လူပေါင်းမှားတတ်တယ်။
(၂) ကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဖက်ဟာ ဘယ်သူဖြစ်နေနေ ငါ့ရန်သူဘဲလို့ သတ်မှတ်သူလဲရှိတယ်။
(၃) မှန်တယ်ထင်ပြီးလုပ်ပေမဲ့ သမိုင်းမကောင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတွေရစေပါတယ်။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ ရပ်နေတဲ့ရှေ့တန်း ညာအစွန်က U Labang Grong ဖြစ်ပါတယ်
Proton beam cancer therapy ကင်ဆာကို ပရိုတွန်ရောင်ခြည်နဲ့ကုသ
ဒီနည်းသစ်မှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီကထွက်တဲ့ ဆေးပညာသုတေသနသတင်းကဆိုပါတယ်။ ထိလည်းထိရောက်ပါတယ်။ အသက်ရှင်နှုန်းလည်း အတူတူသာဖြစ်ပါတယ်။
ယူအက်စ် မက်ဆာချူးဆက်ဆေးရုံမှာ ဒေါက်တာတော်ရန်း ယော့ခ်ကနေဦးဆောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၃ ကနေ ၂ဝဝ၉ ကြားမှာ Medulloblastoma ခေါ် ဦးနှောက်ကင်ဆာရှိတဲ့ကလေး ၅၉ ယောက်ကို ကုပေးခဲ့တာပါ။ လက်ရှိနည်း X-ray radiotherapy ထက် နှလုံးနဲ့ အဆုပ်မှာဖြစ်လာတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ နည်းတာတွေ့ရတယ်။
တခြား Spinal cord tumours ခါးရိုးဆစ်ထဲကအာရုံကြောကင်ဆာ၊ Sarcomas near the spine or brain ဦးနှောက်နဲ့ ခါးရိုးဆစ်ထဲကအာရုံကြော ဆာကိုးမား၊ Prostate cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ Lung cancer အဆုပ်ကင်ဆာနဲ့ Liver cancer အသည်းကင်ဆာတွေကလည်း သုံးနိုင်ပါမယ်။
HIV becoming resistant to Tenofovir ဆေးယဉ်ပါးလာတဲ့ HIV ပိုး
HIV ပိုးဟာ လက်ရှိသုံးနေတဲ Tenofovir ဆေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိတာတာ အာဖရိက တချို့နေရာတွေမှာ ၆ဝ% အထိ ရှိတယ်လို့ သိလာရပါတယ်။ အဲလိုသိအောင် လူနာ ၁၉၂ဝ ယောက်ကို ၁၉၉၈ ကနေ ၂ဝ၁၅ အထိ၊ ၁၇ နှစ်ကြာ လေ့လာခဲ့တာပါ။
ဥရောပမှာ အဲလိုဆေးယဉ်တာ ၂ဝ% သာရှိပါတယ်။ ဆေးယဉ်တဲ့ HIV ပိုးရှိသူကနေ နောက်တယောက်ကို ကူးစက်နေတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
- ဆေး-ကျန်းမာရေးလောကမှာ အထူးကုတွေနဲ့ ဌာနမှူးတွေကိုသာ ကြီးထည့်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဆေးပညာဘွဲ့ တခုသာရတယ်။
- မြို့နယ်ဆရာဝန်လည်း TMO2သာလုပ်ရတယ်။ TMO 1 ကိုသာ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။
- ကြီးထည့်တာမကြိုက်တာဟာ အသက်ငယ်တယ်ထင်စေချင်တာမဟုတ်ပါ။ About မှာ မွေးနေ့အတိအကျ ထည့်ထားတယ်။ ပရိုဖိုင်းပုံကလည်း ငယ်တုံးကပုံမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံရိုက်ပုံကိုလည်း မကြာမကြာသုံးပါတယ်။
- ဆရာကြီးဆိုပြီး ရွဲ့စောင်းခေါ်တာမျိုးလည်း တချို့နေရာမှာရှိတယ်။ (ဆြာ) လို့ရေးတာလည်း ပြောင်လှောင်ရာကျတယ်။
- လေးစားသမှုကြောင့် အဲလိုခေါ်ပါတယ်လို့ ပြန်ရေးလာတာတွေလည်း မနည်းပါ။ ကျွန်တော့်ရပ်တည်ချက် မပြောင်းပါ။ (ဆရာ) ဆိုတာထက် ပြည့်စုံမှန်ကန်တဲ့စာလုံး မရှိပါ။ အပို-အလိုမရှိပါ။ (ဒေါက်တာ) လို့ရေးတာကိုတော့ ယဉ်နေပါပြီ။
Victoria University Collage ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်တွင်ဖွင့်မည်
သတင်းကို အခုပဲဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကဖွင့်မှာပါ။ သူက လက်ရှိ NLD/LA ကိုခေါင်းဆောင်နေပါတယ်။
သတင်းက ဒီလိုဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကဆေးတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်မယ့် သတင်းစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ Victoria University Collage (VUC) မှာ ၂၈-၁-၂ဝ၁၆ နေ့လည် (၁) နာရီက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ NLD နာယက ဦးတင်ဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Victoria Oxford Medical University (VOMU) လို့ အမည်ပေးထားပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာဝင်းနိုင်က သင်ကြားပေးမယ့် MBBS ဘွဲ့ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံ MAHSA University နဲ့ ပညာရေးပူးတွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး ၂ဝ၁၆ ဇွန်လကုန်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နယူးဒေလီမှာနေစဉ်ကတည်းက ဒီကျောင်းဖွင့်ဘို့စီစဉ်နေတာပါ။ အိန္ဒိယကနေ ဆေးစာအုပ်တွေကိုဝယ်ပြီး ရန်ကုန်ကိုပို့ပေးဘို့ပါစီစဉ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဧည့်သည်ဆရာ လာလုပ်ဘို့ကပါသေးတယ်။ သူ့ညီ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကလည်း ကလေးအထူးကုဆရာဝန်။ ကျန်သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဆရာတွေလုပ်ကြပါမယ်။
Photo of Dr. Win Naing (The Irrawaddy)
၁။ ဆရာ ကျွန်မ အသက် ၃၁ ရှိပြီး ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတာ ၃နှစ်ကျော်ရှိပြီး သားသမီးမရှိသေးပါ။ ကျွန်မ miscarriage ဖြစ်တာ၃ခါရှိပါပြီ။ တတိယအကြိမ် ကိုယ်ဝန် ၃ လောက်မှာ ထပ်ဖြစ်လို့ D&C လုပ်ရပါတယ်။ လုပ်ပြီး အသားစအဖြေရတဲ့နေ့မှာပဲ OG ကို သားအိမ်ခေါင်းကာကွယ်ဆေးထိုးချင်တဲ့အတွက် အရင်စစ်ရမလားမေးတော့ စစ်စရာမလိုဘူး တစ်ခါတည်းထိုးလို့ ရတယ်ဆိုလို့ ပထမဆုံး ၁ လုံးကိုထိုးခဲ့ပါတယ်။ အသားစအဖြေအရ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာမရှိဆိုတာ စိတ်ချလို့ မစစ်ခိုင်းတာလား၊ Pep Smear Test လုပ်ဖို့များ လိုဦးမလားလို့ ကျွန်မ စိတ်ပူနေမိလို့ပါ။ ဒုတိယဆေးထိုးဖို့လည်း ၁ဝ ရက်ကျော်သွားပါပြီ။ ကျွန်မအရင်စစ်ပြီးမှ ထိုးရမလား။ ဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုးရမလား လမ်းညွုန်ပေးပါလားဆရာ။ ဒုတိယဆေးကို အခုမှထိုးရင်ရော မှီနိုင်ပါသေးလားဆရာ။ ဘာလုပ်ရမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာမရှင်းတာတွေကို မေးဖို့ရာလည်း ဒီကဆရာများက consult လုပ်ပေးလေ့မရှိကြလို့ပါဆရာ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ HPV နဲ့ cervical cancer အကြောင်းလေးကို စုံစုံလင်လင်သိချင်လို့ပါဆရာ။ ဆရာရေးထားတဲ့ အဲ့ဒီအကြောင်းလေးများရှိရင် သမီးကို တချက်လောက်ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်နေရာနဲ့ ဘယ်လို dose မျိုးထိုးရမလဲဆိုတာလဲသိချင်ပါတယ်ရှင့်။
ကင်ဆာမှန်သမျှ ဘာကနေဖြစ်သည်း တိတိကျကျမသိနိုင်ပါ။ အဆုပ်ကင်ဆာနဲ့ ဆေးလိပ်ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ သားအိမ်အဝ ကင်ဆာနဲ့ ကြွက်နို့ဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ Human papilloma virus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ ကြွက်နို့ ဖြစ်စေတယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့အမျိုးအစားကသာ သားအိမ်အဝကင်ဆာဖြစ်စေတယ်။ သားအိမ်ဝနဲ့ မိန်းမကိုယ်မှာ ကင်ဆာမဖြစ်ခင်အပြောင်းအလဲတွေကနေ သားအိမ်ဝကင်ဆာဆက်ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ မျိုးပွါးနိုင်တဲ့ မိန်းမ၊ ယောက်ျား ၁% မှာ လိင်လမ်းကြွက်နို့ရှိကြတယ်။
လိင်လမ်းကြွက်နို့ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လိင်ဆက်ဆံရာကနေကူးစက်တယ်။ အတော်များများမှာ ပိုးရှိနေမှန်း မသိကြဘူး။ သူ့ဖါသူလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်။ ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ပိုများကြတယ်။ အမျိုးအစားပေါင်း ၄ဝ လောက် ရှိတယ်။ အများစုကတော့ ရောဂါမရစေပါ။ တချို့အမျိုးအစားတွေကနေ မိန်းမသားအိမ်အဝ၊ ယောက်ျားလိင်တံ၊ မွေးလမ်းကြောင်း၊ မိန်းမကိုယ်၊ အာခေါင်နေရာတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တချို့အမျိုးအစားတွေက ယောက်ျားရောမိန်းမပါ လိင်လမ်းကြွက်နို့ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ လိင်လမ်း ကြွက်နို့ကို ကာကွယ်တာဖြစ်တယ်။ သားအိမ်ဝ (ခေါင်း) ကင်ဆာအတွက်သာမက ဂေး (ယောက်ျားလိင်တူ) တွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ စအိုလမ်းကင်ဆာကိုလည်း ကာကွယ်ပါမယ်။
သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး (၂) မျိုးရှိတယ်။ Cervarix ဆိုတာကို Bivalent vaccine နှစ်မျိုးပြီးလို့ခေါ်ပြီး၊ Gardasil ကို Quadrivalent vaccine လေးမျိုးပြီးလို့ ခေါ်တယ်။ Gardasil ကာကွယ်ဆေးဟာ ယောက်ျားလေး-မိန်းကလေးတွေအတွက် HPV 6, 11, 16 နဲ့ 18 အမျိုးအစား ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ တမျိုးထဲသောဆေး ဖြစ်တယ်။
Cervarix ကာကွယ်ဆေးကတော့ HPV 16 နဲ့ 18 တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆေးဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေး ၁ဝ နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ် အရွယ်တွေကိုထိုးပေးဘို့ ၂ဝဝ၉ မှာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ HPV types 16 နဲ့ 18 ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားကို ကာကွယ်ပေးမယ်။ ဒီ ၂ မျိုးကနေ ၇ဝ% သော သားအိမ်အဝကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တခြားကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ HPV types 31, 33 နဲ့ 45 တွေကိုလဲ ကာကွယ်မှုပေးတာကို တွေ့ရသေးပါတယ်။
Gardasil ကာကွယ်ဆေးကို မိန်းကလေးတွေကိုသာမကပါ ယောက်ျားလေး ၉-၂၆ နှစ်ကိုထိုးတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ၁၁-၁၂ နှစ်တွေကို ၃ ခါပြည့်အောင်ထိုးစေတယ်။ အဲဒီနည်းအတိုင်း ဆေးထိုးဘို့အဆင်မပြေရင် ပဌမဆေးပြီးနောက် ၂ လခွဲမှာ ဒုတိယဆေးနဲ့ တတိယဆေးကို ၅ လ နဲ့ တနှစ်အတွင်းမှာ ထိုးနိုင်တယ်။ HPV 6, 11, 16 နဲ့ 18 အမျိုးအစား ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ တမျိုးထဲသောဆေး ဖြစ်တယ်။ အသက် ၉ နှစ်ကနေ ၂၆ နှစ်ကြား မိန်းကလေးတိုင်း ထိုးကြဘို့ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ Gardasil ကာကွယ်ဆေးဟာ လိင်လမ်း ကြွက်နို့အပြင် စအိုကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ် ကင်ဆာ၊ မွေးလမ်းကြောင်း ကင်ဆာတွေကိုလဲ ကာကွယ်နိုင်တယ်။
0.5 mL ကို IM အသားဆေးထိုးရတယ်။ (၃) ခါထိုးရမယ်။ ဒုတိယဆေးကို ပဌမဆေးနောက် ၁-၂ လအကွာမှာ ထိုးတယ်။ တတိယဆေးကို ပဌမေးထိုးပြီးနောက် ၆ လအကြာမှာထိုးတယ်။ ဝ-၁-၆ ပုံသေနည်းသုံးတယ်။ ပဌမဆေးထိုးပြီး နောက် ၁ လမှာ ဒုတိယဆေးနဲ့ တတိယဆေးကို ၆ လအပြည့်မှာ ထိုးရမယ်။ ဝ-၂-၆ ဆိုတဲ့ ဖေါ်မြူလာအတိုင်းလည်း ထိုးပါတယ်။ ဒုတိယဆေးကို ပဌမတခါပြီးနောက် ၂ လမှာထိုးပါ။ ပဌမတခါပြီးနောက် ၆ လမှာ တတိယဆေးထိုးပါ။ ဆေးထိုးပြီး ၁၅ မိနစ်ကြာနားနေသင့်တယ်။
တကယ်လို့ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်က HPV ပို တမျိုး ဒါမှမဟုတ် တမျိုးမကနဲ့ ထိတွေ့ဘူးပြီးဖြစ်နေရင် ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ထိရောက်မှုနည်းနိုင်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေက ပိုးကြောင့်ဖြစ်နေပြီးသားရောဂါကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။ ဆေး ၃ လုံး ထိုးထားပြီးရင် ၆ နှစ်အထိကာကွယ်တာ သေခြာတယ်။ ဒိနောက်လဲ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း မလျှော့သေးပါ။၂၆ နှစ်ကျော်ရင် သိပ်မထူးတော့လို့ မထိုးစေတာပါ။ ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင် အပျိုလား၊ အပျိုမဟုတ်တော့ဘူးလား မေးမနေပါ။ သားအိမ်အဝကင်ဆာ ရှိ-မရှိစစ်တဲ့ Pap test ရော၊ HPV test ပါ စစ်ကြည့်ဘို့မလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးထိုးထားလဲဆေးက အကုန်လုံးကို ကာကွယ်နိုင်တာမဟုတ်လို့ သားအိမ်အဝကင်ဆာရှိ-မရှိဆိုတာကို စစ်ဘို့တော့ လိုအပ်ပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် ကာကွယ်ဆေးမထိုးသေးပဲ နေသင့်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးက ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်စေတာ မတွေ့ရသေးပေမဲ့ သုတေသနတွေကမပြည့်စုံသေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေမှန်းမသိဘဲ ကာကွယ်ဆေး ထိုးမိရင်လဲ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ပြစ်ဘို့ မလိုအပ်ပါ။ ဆက်ထိုးရမဲ့ဆေးကိုတော့ ကလေးမွေးပြီးမှ ထိုးသင့်တယ်။ အစကနေပြန်ထိုးဖို့မလိုပါ။
ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ ကင်ဆာဆေး၊ စတီရွိုက်ဆေး (များရင်) နဲ့ ခုခံအားကျဆေးေGင်္သုံးနေချိန်မှာ ထိရောက်မှုနည်းမယ်။ တခြားကာကွယ်ဆေးတွေ Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Polio vaccines နဲ့ တရက်ထဲ ထိုးလို့ ရပါတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာတော့ အတူမဖြစ်ရပါ။ ပိုးဝင်ထားပြီးအမျိုးသမီးတွေက ရောဂါဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပိုးကိုရော ရောဂါကိုပါ ကာကွယ်ဆေးက ပျောက်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးတွေက ပိုးကြောင့်ဖြစ်နေပြီးသား ရောဂါကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာမယ်၊ နီမယ်၊ ရောင်မယ်။ ခေါင်းကိုက်၊ ကြွက်သားနာ၊ အားယုတ်နိုင်တယ်။ သက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုံးထားတာ မဟုတ်လို့ HPV ပိုးဝင်တာအတွက် စိတ်ချရတယ်။
1. Cervarix သားအိမ်ဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cervarix.html
2. Gardasil vaccine သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/gardasil-vaccine.html
3. HPV vaccine and Marriage သားအိမ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးနှင့် လက်ထပ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hpv-vaccine-and-marriage.html
4. HPV Vaccine for Ca Cx သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hpv-vaccine-for-ca-cx.html
5. Pregnancy and HPV Vaccination သားအိမ်-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hpv-vaccination_4.html
သတင်း = သူရဦးရွှေမန်း နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်း နားထောင်စဉ် အမျိုးသမီးအမတ်အချို့ မျက်ရည်က
ဝိဓူရဦးချစ်မောင် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာကို အမှတ်ရတယ်။ သခင်ချစ်မောင် (၁၉၁၅-၂ဝဝ၅) ဟာ (ဖဆပလ) ခေတ်မှာ (ပမညတ) ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၂ မှာ ပြည်ထောင်စုမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကြီးကို ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုကဦးဆောင်ပြီးကျင်းပတော့ (ပမညတ) ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ မိန့်ခွန်းပြောရတယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ ၁-၃-၁၉၆၂ ရက်နေ့ဖြစ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအာဏာမသိမ်းခင် တရက်အလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးချစ်မောင်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို ကျွန်တော့ဘလော့တခုမှာ တင်ထားပါတယ်။ http://union-affairs.blogspot.com/2009/03/blog-post_02.html
ပုဏ္ဏနတ်ဘီလူးက သိန္ဓောမြင်းကိုစီးပြီး ကောရဗျပြည်ကိုသွားတယ်။ ကြွေအံကစားဝါသနာကြီးလှတဲ့ ကောရဗျဘုရင်နဲ့ ကြွေအံကစားတယ်။ သူရှုံးရင် သိန္ဓောမြင်းနဲ့ အဖိုးထိုက်သည့် ပတ္တမြားကိုပေးမယ်။ သူအနိုင်ခဲ့ရင် ဝိဓူရသုခမိန်ကိုပေးလို့ လောင်းကြေးထပ်တယ်။ ကောရဗျဘုရင်ရှုံးလို့ ဝိဓူရကို ပေးလိုက်ရတယ်။
၂-၃-၁၉၆၂ နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းတော့ ဝိဓူရချစ်မောင်က ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာ ကျရာနေရာက ထမ်းပါ့မယ်၊ ခွေးကတက်မှာ နေရနေရဆိုပြီးပြောလို့ ခွေးကတက်လမ်းစဉ်ဆိုပြီး နာမည်တွင်ပြန်ပါတယ်။
နေ့ခင်းတုံးက VOA ကမေးလို့ ဦးရွှေမန်းနှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်ဖြေရတယ်။ ရေဒီယိုရဲ့ အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့် (၂) ချက်သာ အသံလွှင့်နိုင်တယ်။
(၁) ၅ နှစ်စာ လွှတ်တော်ဥက္ကတာဝန်အရ ကြည့်ရင်တော့ ဦးရွှေမန်းဟာ စွမ်းနိုင်သလောက်လုပ်သွားသူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တရင်းတနှီးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရင် ဘယ်သူကနေ ဘယ်သူ့ကိုစည်းရုံးသလည်း မပြောနိုင်ပေမယ့် အကျိုးရလဒ်ဟာ သိသာပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်။
(၃) ဦးရွှေမန်းဟာ စစ်တပ်တာဝန်ရှိစဉ်တုံးက ဗခမကသန်းရွှေပြီးရင် နောက်တက်မယ့်သူလို့တစ်ပြေးထားသူဖြစ်တယ်။ သူ့အဝန်းအဝိုင်းမှာ ခရိုနီတွေရှိတယ်။ အဲဒီလို အနုတ်သဘောဒေါင့်ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အစမှာ စောင့်ကြေည့်နေခဲ့ရသူ ဖြစ်တယ်။
(၄) မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ဦးရွှေမန်းဟာ အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဘာတွေ သဘောတူခဲ့သလည်းက နိုင်ငံတော်လှို့ဝှက်ချက်လုပ်တားတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ဆက်ဆံရေးကို အမေရိကန်က စောင့်ကြည့်နေတယ်။
(၅) တပ်မတော်သားအမတ်တွေကို သူကနေ သတိပေးစကားမျိုးပြောခဲ့တာရှိတယ်။ သတ္တိရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထွက်ရခင်လေးမှာ NLD ကိုယ်စားလှယ်ကနေ စစ်တပ်စီးပွါးရေးလုပ်နေတာကိုဆွေးနွေးလို့ သတိပေးခဲ့တာကတော့ မပြောသင့်တာလို့မြင်ပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံ ဗင်ကူးဗားမြို့အခြေစိုက် CytoDyn Inc. ဆေးကုမဏီကနေ ၂ဝ၁၇ မှာ HIV ကုသဘို့ ထိုးဆေး ပေါ်လာမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီဆေးသုတေသနကို PRO 140 monotherapy ဆေးထိုးကုသနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်နေတာ တချို့လူနာတွေ ၁၇ လရှိပါပြီ။ အဆင့် (၁) မှာ လူနာပေါင်း ၂၃ ယောက်ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ဒီဆေးကနေ Complete viral-load suppression ဗိုင်းရပ်စ်အရေအတွက်ကိုဖိနှိမ်ထားစေပါမယ်။ ဆေးက တမျိုးတည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသုံးနေတာက HAART combination therapy ဆေးအတွဲစားဆေးဖြစ်ပါတယ်။
PRO140 ဆေးကနေ T-cells တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ HIV co-receptor CCR5 ကို ဘလော့ခ်လုပ်ပေးလို့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဝင်မလာစေနိုင်တော့ပါ။ ဆေးဟာ ခုခံအားခေါ် (အင်တီဘော်ဒီ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးကာလသတ်မှတ်မှုကို အတည်မပြုသေးပါ။ ၁၂ ပတ် အနည်းဆုံးထိုးမယ်။ ၆ဝ ပတ်အထိ ထိုးတာကိုလည်း စမ်းသပ်နေပါတယ်။
လူတယောက်ရဲ့လက်မှတ်ဟာ သူ့ရုပ်ပုံဖြစ်တယ်။(စနက်ပ်ရှော့) ဖြစ်တယ်။ သူ့ (ဆယ်လ်ဖီ) ဖြစ်တယ်။ လက်မှတ်ပုံစံ၊ စာလုံးအကြီးအသေး၊ ထင်ထင်ရှားရှား၊ မထင်မရှား၊ ပြတ်ပြတ်သားသား၊ မှုံဝါးဝါး၊ အကောက် အဖြောင့် စတာတွေကို ကြည့်ပြီး လက်မှတ်ပိုင်ရှင်အကြောင်း မှန်းသိနိုင်တယ်။ အဆုံးမှာ အစက်အပျောက်ချတာ၊ အောက်မှာမျဉ်းဆွဲတာ၊ ဒေါင့်ကျတာ၊ အစဆုံးစာလုံးနဲ့ အဆုံးစာလုံးတွေကိုလည်း ကြည့်ရတယ်။ ရိုးသားမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု စတာတွေကလည်း သိနိုင်တယ်။ သူ့အကြောင်းဆိုတာထက် သူကနေသူများတွေကိုပြလိုတာလို့ပြောရင် ပိုမှန်တယ်။
လက်မှတ်အောက်မှာ မျဉ်းလေးတကြောင်းတည်းဆွဲသူမျိုးက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်တတ်သူ။ အစဉ်အလာ ယုံကြည်စရာနဲ့ တန်ဘိုးထားမှုတွေကို လိုက်နာသူဖြစ်မယ်။ အဲဒီမျဉ်းက နည်းနည်းကောက်နေရင် သူများတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားချင်သူဖြစ်မယ်။ (ဇစ်ဇက်) လိုဖြစ်ရင် သူ့အမူအယာ မသေချာတတ်သူဖြစ်မယ်။ (ဇစ်ဇက်) ရှည်လေ အဲမသေချာမှု ကဲလေ။ ရှေ့သွားလိုက်နောက်ပြန်လိုက်ဆိုရင် စိတ်ရှုတ်ထွေးမှုရှိသူဖြစ်မယ်။ လှိုင်းလိုတွန့်နေရင် ဟာသသဘောရှိတဲ့သူ။
လက်မှတ်အရွယ်အစားဟာ သူများကသိစေလိုတာကိုညွှန်းတယ်။ သူ့ကိုသိစေချင်ရင် ကြီးကြီးထိုးတယ်။ မသိလည်း နေပါစေသမားက သေးသေးထိုးတယ်။ ကဲလွန်ရင် အဲဒီသဘောမျိုးက လွန်ကဲတယ်။ လက်မှတ်ကို ထင်းထင်းကြီးထိုးရင် သူ့ဆိုင်းဘုတ်ကို တင်နေသူမျိုးဖြစ်မယ်။ အစက်အပျောက်ချတဲ့သူဟာ သူများတွေနဲ့ မတူထူးလို့ပြဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ မျဉ်းဆွဲတာမှာ လက်မှတ်ထိုးစာရွက်တောင် ကျော်သွားအောင်ဆွဲသူမျိုးဟာ ဖန်တီးတတ်သူဖြစ်မယ်။ ဉာဏ်လည်း သုံးတတ်သူဖြစ်မယ်။
၁။ Strike-through signature လက်မှတ်ကို ဖြတ်မျဉ်းဆွဲခြင်း
ပုံပါလက်မှတ်ပိုင်ရှင်ဟာ သူ့ကိုသူသတ်သေသွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုတုံးက ဘုံဘေမှာပါ။
၂။ Camouflage signature ကိုယ်ဖျောက်လက်မှတ်
လက်မှတ်ကြည့်ရတာတော့ရှင်းတယ်။ ပဌမစာလုံးနဲ့ စက်ဝိုင်းပါတယ်။ ဆွဲနည်းကမမှန်ဘူး။ အဲတာက ပဌမစာလုံးကို ဖျောက်ထားတာ။ သူ့ကိုယ်သူ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ဘို့ကြိုးစားတယ်။ သူ့ကို ထိခိုက်လာမှာကို အလွန်စိုးရိမ်တယ်။ လူပေါင်းသိပ်မဆန့်ဘူး။
၃။ Small signature လက်မှတ်သေးသေး
၄။ Trace-back signature မျဉ်းနောက်ပြန်ဆွဲလက်မှတ်
အချိန်တော်တော်များများ သူတို့အတိတ်ထဲကနေထွက်မလာသူမျိုး။ စိတ်ထဲမှာ အတိတ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး လွှမ်းမိုးနေတယ်။
၅။ Scribbled signature သုတ်သီးသုတ်ပြာ
အကွေ့တွေများတယ်။ ပြာလောင်ခတ်နေတတ်တယ်။ လက်ထက် စိတ်ကပိုမြန်နေတယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ် Alphabet အက္ခရာမှာ ကွန်မင့်ပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သတင်းကို ရေဒီယိုကနေ နှစ်ခါပြန်နားထောင်လိုက်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ဒုက္ခိတဖြစ်ရတော့မယ်လို့သာရေးပြီး သေတော့မယ်လို့မရေးပါ။
ဆေးကျောင်းမှာ ဆေးပညာစာတွေအကုန်ပါတဲ့ စာအုပ်ထူထူကြီးတွေသုံးရတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးစေ့ပတ်စေ့ မသင်ပါ။ မြန်မာဖတ်စာမှာလည်း စာအုပ်ထဲပါသမျှ အပုဒ်တိုင်းကိုမသင်ပါ။ သင်မယ့်စာကိုသာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲ ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ကြိုတို့ အောင်ရမည်တို့ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ကိုသာ ပြဋ္ဌာန်းပေတော့ဗျာ။
ကလေးတွေ စာဆိုတာနဲ့စတွေ့ချိန်မှာ အင်္ဂါစုံတာကိုသာ တွေ့စေချင်တယ်။ သင့်တာကိုရွေးသင်တာက တမျိုးပါ။ ကျွန်တော်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့၊ သွေးနုသားနုတို့ကို မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်အကြောင်းစာတွေကို မဖတ်ပါနဲ့လို့ အမြဲသတိပေးပါတယ်။
သတင်း = သူငယ်တန်းမြန်မာစာ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာသစ်မှာ ဗျည်း (၃၃) လုံးအစား (၈) လုံးဖြုတ်ပြီး ဗျည်း (၂၅ ) လုံးဖြင့်သာ သင်ကြားမည့်အစီအစဉ်
အဘိဓာန်မှာ Alphabet = အက္ခရာ၊ ဗျည်းသရအက္ခရာလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ ဗျည်း၊ သရ၊ အက္ခရာ၊ မတူကြပါ။
ဘာသာစာတခုတိုင်းမှာ အက္ခရာအရေအတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတယ်။ မြန်မာစာမှာ ရုရှားနဲ့အတူတူ (၃၃) လုံး ရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဂျာမန်နဲ့အတူတူ (၂၆) လုံးရှိတယ်။ စပိန် (၂၉) လုံးနဲ့ ဟင်ဒီ (၁၁) လုံးရှိကြတယ်။ တရုပ်စာကို Characters သင်္ကေတစာလို့ခေါ်တယ်။ သုံးထောင်ကျော်ရှိတယ်။ ဂျပန်စာကလည်း နှစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်။
ပညာရေးကိုလက်တည့်စမ်းသူတွေလက်ချက်နဲ့ မြန်မာစာ ဒုက္ခိတဖြစ်ရတော့မယ်။
• ဈေးသည်ဈေးဝယ် ကွယ်၊ ဈေးပေါင်ကျိုး အရိုးရောဂါထင်မှားမိ၊ ဈေးချို မန္တလေးမှာမလိုတော့လားမသိ၊
• ဈာပနကို အသုဘလို့မသိ၊ ဈာန်တရားမရ၊ ဈာန်ပျံမကြွ၊ မဇ္ဈိမဒေသ ဘုရားဖူးမသွားကြ၊ မဇ္ဈိမပဋိပဒါတရား ကျင့်ကြံဘို့မလိုတော့တာလား။
• ဃနာနို့ဆွမ်း ဘာမှန်းမသိ၊ သံဃာ လာတရားမဟောနဲ့၊ ဃရာဝါသအမှုသာပြု၊
• ဥက္ကဋ္ဌမရှိ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌဘယ်သူဖြစ်လာမှန်းမသိ၊
• ဋီကာကျော် မကျော်တော့၊ ဋီကာချဲ့မရ၊
• ပါဠိ အနိစ္စရောက်သွားရ၏။ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ကြီး ကွယ်ပျောက်သွားတော့သတည်း။
အမေရိကန်သမတ (ရစ်ချတ်နစ်ဆင်) ဟာ သမိုင်းတင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ၁၉၆၉ ကနေ ၁၉၇၄ အထိ အမေရိကန်သမတ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့လက်ထက် ၁၉၇၃ မှာ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ ရန်သူတော်တရုပ်ပြည်ကို ၁၉၇၂ မှာ အလည်သွားခဲ့တယ်။ သူ့လုပ်ရပ်အားလုံးထဲမှာ ပိုပြီးအမှတ်ထင်ထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာကတော့ Watergate ဝါးတာဂိတ် အရေးအခင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၇-၆-၁၉၇၂ ခုနှစ်တုံးက ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရုံးချုပ်ထဲမှာ လူ (၅) ယောက်ခိုးဝင်တဲ့အမှုကနေ စတယ်။ နောက်ဆုံး ၉-၈-၁၉၇၄ နေ့မှာ သမတအဖြစ်ကနေ သက်တမ်းမကုန်သေးပဲ နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်ရတယ်။
ပုံပါ သူ့လက်မှတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် သူ့မှာစိတ်ဖိအားတွေ ဘယ်လိုများများလာခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖတ်နိုင်ပါမယ်။ သုတေသနလုပ်သူကတော့ Signature getting progressively lazier ပြင်းပြင်းလာတယ်၊ ထိုင်းထိုင်းလာတယ်လို့ သုံးပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ထွက်တော့မယ် သမတရဲ့လက်မှတ်တွေကို ဘယ်သူများသုတေသနလုပ်နိုင်မလည်း။
စာသင်နေတဲ့ကျောင်းမှာ ခဲတံတချောင်းကိုင်အမြဲလိုလိုကိုင်ထားရတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ရေးတာဖြေတာမှာ လွဲတာလေးတွေတွေ့တိုင်း ခဲတံနဲ့လိုက်ပြင်ပေးတယ်။ စာစစ်နေရင်လည်း ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေအတွက် မနေတတ်လို့ တခြားဆရာဆရာမတွေမသိအောင် ကွန်ပြူတာဆခရင်မှာ ခဲတံနဲ့ထောက်ပြီး ပြောပေးတယ်။ ဘယ်တော့အလုပ်ပြုတ်မယ် မသိဘူး။
Photo in my classroom on 1/27/2016 (ဒီမှာက နေ့စွဲရေးရင် လ-ရက်-နှစ် လို့သာရေးတယ်။)
သွားကြားထိုးတံက သွားနဲ့ သွားဖုံးကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါ။ သွားကြားထိုးတံကို သစ်သား၊ ဝါး၊ ပလပ်စတစ်၊ သတ္တုနဲ့ အရိုးတွေကနေလုပ်တယ်။ အမေရိကမှာ ၁၈၂၆ ကတည်းက Birch wood သစ်သားကနေလုပ်တာကို စသုံးတယ်။ သွားကြားထိုးတံသမိုင်းမှာတော့ Neanderthals ခေတ်မှာရော၊ Homo sapiens ခေတ်မှာပါသုံးခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အမေရိကတိုက်မှာလည်း သက်တမ်း ၇၅ဝဝ ရှိတဲ့ ဌာနေ အမေရိကန်တွေလည်း သွားကြားထိုးတံ သုံးခဲ့နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သွားကြားထိုးတံဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ မရှိမဖြစ်အသုံးအဆောင်တခုဖြစ်ပါတယ်။ သွားလေရာ ယူသွားရတယ်။ ဝါးနဲ့လုပ်တဲ့ သွားကြားထိုးတံကလွဲရင် တခြားဘာနဲ့လုပ်တာကိုမှမကြိုက်ပါ။ အိန္ဒိယမှာ သစ်သားနဲ့လုပ်တာတွေသာရလို့ ထိုင်းသွားရင် ဝယ်လာရတယ်။ ကိုယ်မသွားနိုင်သေးရင် လူကြုံနဲ့မှာရတယ်။ မှာတဲ့သူက သဘောကောင်းပြီး ပလပ်စတစ်နဲ့ ကြိုးလေးပါ ပါတာဝယ်လာလည်း မသုံးဖြစ်ပါ။
ထိုင်းနယ်စပ်မှာ နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးတွေ ခဏပေါင်းများစွာလုပ်တယ်။ ထမင်းစားပြီး သွားကြားထိုးတံမပါတဲ့အခါ ခက်ပြီ။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတခုကခေါင်းဆောင်တယောက်က ဘေးနားမှာရှိတဲ့ အုန်လက်လေးချိုးပြီး သွားကြားထိုးနည်းပြပေးတာ အတော်အဆင်ပြေလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။
ကျွန်တော် ပြည်တွင်းမှာနေစဉ်က ပုလဲကနေ ဘုတလင်ကို မိသားစုလိုက် မကြာမကြာအလည်သွားကြတယ်။ မုံရွာမြောက်ဖက် အလုံနားရောက်ရင် ချင်းတွင်းမြစ်ဘေးမှာ သစ်လုံးကြီးတွေချထားတာကို အမြဲတွေ့ရတယ်။ ကလေးတွေကို ဟေ့့ ဟိုသစ်လုံးတလုံးလောက်ယူခဲ့ကြအောင်ကွာ၊ သွားကြားထိုးတံလုပ်ဘို့လို့ ရယ်စရာပြောလေ့ရှိတယ်။
နှစ် ၃-၄ဝ အကြာမှာ သစ်လုံးကိုသွားကြားထိုးတံနဲ့နှိုင်းပြောတဲ့သူ နောက်တယောက်တိုးလာတယ်။ အဲတာက မရယ်ရပါ။
ဆရာ တောထဲမှာ ငှက်ရှိရင် ငှက်ဖျားမရှိဘူး၊ လူနေများရင် ငှက်ဖျားမရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်လား။ ဘယ်ချိန်ကိုက်တဲ့ ခြင်က ငှက်ဖျားဖြစ်လဲ။
ခြင်တွေဟာ Nectar feeders ဝတ်ရည်စုပ် အင်းဆက်ကောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အထီးနဲ့ အမ အတော်မတူကြပါ။ ခြင်မက ပိုပြီးသန်မာတယ်။ ပိုလည်းအသက်ရှည်တယ်။ ခြင်ထီးတွေက သွေးမစုပ်သလောက် ဖြစ်ပြီး၊ အပင်တွေကိုသာ မှီခိုအသက်ရှင်တယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ စိုထိုင်းမှု၊ အပူချိန်၊ (အမိုင်နို-အက်စစ်) နဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းကို သုံးပြီး သားကောင်လူကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ရွေးခြယ်နိုင်ကြတယ်။
ခြင်မက ပိုပြီးသန်မာတယ်။ ပိုလည်း အသက်ရှည်တယ်။ သူများ ဒုက္ခပေးတယ်။ ခြင်ထီးတွေက သွေးမစုပ်သလောက် ဖြစ်ပြီး၊ အပင်တွေကိုသာ မှီခိုအသက်ရှင်တယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ ပါတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းမှု၊ အပူချိန်၊ (အမိုင်နို-အက်စစ်) နဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းကို သုံးပြီး သားကောင်လူကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ရွေးခြယ်နိုင်ကြတယ်။
ခြင်အမတွေဟာ သွေးမစုပ်ဘဲလဲ ရှင်နိုင်ပေမဲ့ ဥအတွက် (ပရိုတင်း) နဲ့ သံဓါတ်လိုတာမို့ Blood meal သွေးစုပ်ကြတယ်။ ခြင်က သွေးမစုပ်ခင် သူ့တံတွေး Saliva ကို အရင်ထုတ်တယ်။ လူ့သွေးဆိုတာ သွေးကြောတွေထဲက ထွက်ရင် ခဲတယ်။ ခြင်ရဲ့ တံတွေးက Anticoagulant သွေးမခဲစေတဲ့ သတ္တိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခြင်ရဲ့ တံတွေးကနေ သွေးခဲစေတတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသဘို့ ကြိုးစားကြတယ်။
Toxorhynchites ခြင်မျိုးက သွေးမစုပ်ပေမဲ့ သက်သတ်လွတ် မဟုတ်ဘူး။ ဇာတ်တူသား စားကြလို့ ခြင်နှိမ်နင်းရေးမှာ သုံးပါတယ်။
ခြင်ကိုက်ခံရရင် စောစောပိုင်းမှာ ဘာမှ မခံစားရဘူး။ ဥပမာ ကလေးငယ်လေးတွေ။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ရောဂါပြီးစနစ်ကနေ (အင်တီဘော်ဒီ) ခုခံအားတွေ ထုတ်လာတော့မှ နီတာ၊ ယားတာ၊ ရောင်တာတွေ ဖြစ်လာရတယ်။ တချို့လူကြီးတွေ ခြင်ကိုက်တာ ပြီးသလိုနေတယ်။ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်နေသူတွေ ခြင်ထောင်မဝယ်နိုင်ကြဘူး။ တချို့ကြ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်ရတယ်။ Skeeter Syndrome လို့ ခေါ်တယ်။
လူကို ကူးစက်စေတဲ့ရောဂါတွေကို ခြင်ကနေသယ်ပေးလို့ Carriers ဒါမှမဟုတ် Vectors လို့ခေါ်တယ်။ ခြင်အမျိုးပေါင်း ၃ဝဝဝ လောက်ထဲမှာ ၃ မျိုးကတော့ လူတွေကို သေစေအောင် ဒုက္ခပေးတယ်။
၁။ Anopheles mosquitoes ခြင်မျိုးကနေ Malaria ငှက်ဖျားဖြစ်စေတယ်။ Protozoa (ပရိုတိုဇိုးဝါး) အမျိုးအစားလို့ ခေါ်တယ်။ တချို့ခြင်တွေက Filariasis ဆင်ခြေထောက်ပိုးကို သယ်ပေးတယ်။ Helminthiasis သန်ကောင် အမျိုးအစား ထဲမှာ ပါတယ်။ တချို့က Encephalitis ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ရစေတယ်။ Virus (ဗိုင်းရပ်စ်) အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။
၂။ Aedes mosquitoes ခြင်မျိုးကနေ Yellow fever အသားဝါ-အဖျားရောဂါ၊ Chikungunya ဆင်ဖြူတော်-တုပ်ကွေး၊ West Nile virus (အနောက် နိုင်းလ်) ဗိုင်းရပ်စ်၊ St. Louis encephalitis (စိန့်-လူးဝစ်) ဦးနှောက်ရောင်တွေ ဖြစ်စေတယ်။ Dengue fever (DHF) သွေးလွန်တုပ်ကွေးကို Aedes aegypti ခြင်က အများဆုံးဖြစ်စေပြီး Aedes albopictus ခြင်ကနေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ သူ့ကို Asian tiger mosquito ခြင်ကြားခေါ်တယ်။ နေ့ခင်းကိုက်ခြင်လို့ နာမယ်တွင်တယ်။
၃။ Culex mosquitoes တွေက Filariasis ဆင်ခြေထောက် နဲ့ West Nile virus (အနောက် နိုင်းလ်) ဗိုင်းရပ်စ်၊ Japanese encephalitis ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်၊ St. Louis encephalitis (စိန့်လူးဝစ်) ဦးနှောက်ရောင် နဲ့ Avian malaria (အေဗီယန်) ကြက်ငှက်-ငှက်ဖျားရောဂါတွေ ဖြစ်စေတယ်။
ငှက်ဖျားနဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်စေတဲ့ ခြင်အမျိုးတွေ မတူဘူး။ ငှက်ဖျားခြင်မတွေက တောတောင်၊ စိမ်းစမ်းတွေမှာ နေတာများတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ခြင်မတွေက မြို့တွေမှာ ရှိတာများတဲ့ ဆိုင်ကယ်-မော်တော်ကား တာယာဟောင်း၊ ပုံးခွံ၊ ပေပါခွံတွေ၊ နေရာတိုင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ ရေအိုး၊ ညောင်ရေအိုးတွေမှာ ကျန်နေအောင်းနေတဲ့ ရေတွေမှာနေကြတယ်။
ရိုးရိုးခြင်နဲ့ ငှက်ဖျားခြင် မတူကြပါ။ ရိုးရိုးခြင်က နားရင် သူ့ကိုယ်နဲ့ လူ့ကိုယ် မျဉ်းတပြေးထဲ ရှိတယ်။ ငှက်ဖျားခြင်က အမြီး ထောင်နေမယ်။ Antenna ဦးမှင်ဟာ Proboscis နှုတ်သီးထက် ရှည်တာက ရိုးရိုးခြင်၊ ဦးမှင်က နှုတ်သီးထက် တိုတာ-ထူတာက ငှက်ဖျားခြင်။ မြေကြီးနဲ့ နီးနီးမှာ ပိုကိုက်တယ်။ လူတွေလိုဘဲ ခြင်တွေမှာ ညာသန်-ဘယ်သန်လဲ ရှိသေးတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်စေတဲ့ ခြင်မက ဝီရိယကောင်းကြတယ်။ အများအားဖြင့် မနက်မလင်း-တလင်း ကိုက်တာ များတယ်။ မ-သဘာဝ ညကြရင် အိမ်တွင်းပုံးနေတယ်။ ငှက်ဖျားဖြစ်စေတဲ့ ခြင်အများစုဟာ Active at dusk or dawn လင်းအားကြီးနဲ့ ညနေခင်းကိုက် Crepuscular နဲ့ Active at night ညကိုက် Nocturnal မျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ သိပ်ပူချိန်မှာ ခြင်တွေက အေးတဲ့နေရာတွေသွား နားနေလေ့ရှိတယ်။ မကိုက်ဘဲ နေတာတော့မဟုတ်ပါ။ ငှက်ဖျားဖြစ်စေတဲ့ Anopheles mosquitoes ခြင်တွေက အခန်းအောင်း Endophagic အမျိုး နဲ့ အခန်းပြင် Exophagic အမျိုးတွေ ရှိတယ်။ လူကို ကိုက်ပြီး (သွေးစုပ်) ပြီးရင် တချို့ခြင်တွေက Rest indoors (Endophilic) အခန်းအောင်းကြတယ်။ တချို့ကလဲ Rest outdoors (Exophilic) အပြင်မှာ နေကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခြင်နှိမ်နင်းရာမှာ နည်းအတူတူ မရဘူး။
Nocturnal Endophagic Anopheles mosquitoes ညကိုက်-အခန်းအောင်ခြင်ကို ကာကွယ်ဘို့ Insecticide-treated bed nets (ITNs) ခြင်ဆေးသုံး-ခြင်ထောင် သုံးရမယ်။ အိမ်ဆောက်တာမှာ Window screens ခြင်ဇကာ တပ်ရမယ်။ အခန်းထဲကို Indoor spraying of residual insecticides ဆေးဖြန်းနိုင်တယ်။ Exophilic vectors အမျိုးအစားခြင်တွေ နှိမ်နင်းဘို့ Breeding sites ခြင်ပေါက်ဖွါးရာကို အာရုံစိုက်ရတယ်။
လူကိုကိုက်တဲ့ခြင် Anthropophilic နဲ့ တိရစ္ဆာန်ကိုက်ခြင် Zoophilic ဆိုပြီးရှိတယ်။ ငှက်ဖျားခြင် အများဆုံးက လူကို ကိုက်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ရောဂါအများစုဟာ အရွယ်ရောက်ခြင်မတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်လို့လွယ်အောင် ငှက်ဖျားခြင်က တောသူ၊ သွေးလွန်ခြင်က မြို့သူလို့သာမှတ်ပါ။
Antennae ခြင်အထီးနှာမောင်းမှာ အမွှေးနုလေးတွေပိုများတယ်။ အဲတာက အကြားအာရုံအတွက်ဖြစ်တယ်။
Size ခြင်အထီးက အရွယ်အစားပိုသေးတယ်။
Sound ခြင်အမက အသံပိုကျယ်လောင်တယ်။
Proximity to human ခြင်ထီးက သွေးစုပ်စရာမလိုလို့ လူနားမကပ်ပါ။ ခြင်မသာလူနားကပ်တယ်။
Lifespan ခြင်အမကအသက်ပိုရှည်တယ်။ ခြင်ထီးက ၁ ပါတ်သာအသက်ရှည်ပြီး သဘာဝဝန်းကျင်မှာ ခြင်မက ၁-၂ ပါတ်ရှင်နေမယ်။ ခြင်မကို စမ်းသပ်ဘို့ဖမ်းပြီးထာတဲ့နေရာမှာ သူကြိုက်တဲ့အခြေအနေ ဖန်တီးပေးထားရင် ၁ လကျော်အထိ ရှင်နိုင်တယ်။ ခြင်ထီးက ၁ ပတ်သာရှင်နေနိုင်တယ်။ ခြင်ထီးတွေက ပန်းဝတ်မှုံကိုစုပ်ယူစားသုံးတယ်။ ခြင်မတွေအများစုက သွေးမစုပ်ရရင် မျိုးမပွားနိုင်ပါ။
5. Marsh Mosquitoes
10. Psorophora ciliata
11. Yellow fever mosquito